2012 July 11 | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Posts made in July 11th, 2012	39
one candle စေတနာရှင်လူငယ်များ အဖွဲ့၏ ခရီးစဉ်(၁၂) (6.7.2012)
နှစ်ခုထက်ပိုသော ဂျီမေးလ်အကောင့် ၊တစ်ပြိုင်နက်ဝင်နိုင် ။
Comments By Postအဟံ ပထမံ - padonmar - ဦးဦးပါလေရာမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - padonmar - ခရီးသည်ကြီးအတ္တဆန် - ခရီးသည်ကြီး - အလင်း ဆက်အိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - padonmar - ခရီးသည်ကြီးသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - ဦးဦးပါလေရာ - Ko chogyiယုံလား? - ဦးဦးပါလေရာ - အလင်း ဆက်Passport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - ဦးဦးပါလေရာ - ဦးဦးပါလေရာကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - Ko chogyi - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - parlayar 46 - padonmarငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - အလင်း ဆက် - padauk moeမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - အလင်း ဆက် - မောင် ပေကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - အလင်း ဆက် - Ma Maကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - အလင်း ဆက် - TNAမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - padonmar - black chawအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - အလင်း ဆက် - TheWinner Getprizeလူပါး ပုလင်းထိ - Ma Ma - Ma Maမင်းပြုစားနေတဲ့ မုသားစကားလေးတစ်ခွန်း............ - အလင်း ဆက် - padauk moeနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၄) - GaviaGirl - မောင် ပေအညာနွေ ဘယ်ဆီခန်း တောင်ညိုနေကွယ်သမ်း............. - မောင် ပေရာသီပိတ်ပွဲစဉ်များထဲမှ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - အလင်း ဆက်သင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ... - padauk moe - TNAပုသိမ်မြို့ ရေကြည်ဦးရပ်ကွက် ၁၃ လမ်းမှ..... - မောင် ပေစံနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြင်ချင်ရင် စနစ်ကို တပြည်လုံးလေ့ကျင့်ပါဝင်ရမည်။ - မောင် ပေ - Mobile13ရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - TNA - မောင် ပေEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities